Saka unogona kushandisa iyo iOS 11 ARKit kufamba neGPS uye nekuona nzvimbo dzekufarira | IPhone nhau
Saka unogona kushandisa iyo iOS 11 ARKit kufamba neGPS uye nekuona nzvimbo dzinonakidza
Iyo ingangodaro iri yeimwe inonakidza inoverengeka yeiyo iOS 11, iyo ARKit kana kuti, Apple yakawedzera chokwadi. Chokwadi chakawedzerwa icho, kunyangwe chave nesu kwenguva yakati, kwete kubva kuApple, hachina kukura kwakakosha. Uye isu tatozviziva izvo Apple ndiyo iyo kambani iyo pakupedzisira inoguma yagadzira chimwe chinhu chine mufashoniIvo vanotora nguva kuivandudza, asi vanozopedzisira voigadzira panguva iyo tekinoroji iri pakanyanya kunaka
Uye isu tiri mune yakazara beta yeIOS 11, vhiki ino tinotarisira kuti nyowani beta vhezheni yakanyanya kugadzikana, uye hatimire kuona miedzo yakatenderedza iyi ARKit, chishandiso cheaugmented chokwadi chaicho vanogadzira. Isu takaona roketi reFalcon 9 kubva muSpaceX chirongwa ichimhara mudziva, uye ikozvino tinoona chimwe chinhu chakanyanya kunakidza: kukwanisa kushandisa iyo chaiyo yeARKit yakawedzera kufamba nemamepu app ... Mushure mekusvetuka tinokuratidza demo iri kuti iwe ugone kuwana zano rezvose zvichauya.
Sezvauri kuona muiyo yapfuura vhidhiyo, mikana yacho isingaperi, simba iva munzvimbo yeguta uye unongedze needu iPhone kuti uone iwo mapoinzi ekunakidzwa (POI) yatinayo pamberi pedu. Ok, yatove nguva yakareba kubvira paine maficha aiita zvakafanana zvinhu, vese avo vanouya mundangariro nyeredzi apps nayo yekuwana mapoka enyeredzi, asi izvi zvinovimbisa kuve zvakanyatsojeka uye kuti zvinyatsobatanidzwa nekamera yemidziyo yedu.
ARKit + CoreLocation, chikamu 2 pic.twitter.com/AyQiFyzlj3
Uye kwete chete mukana wekuona Pfungwa dzeKufarira pamepu yedu, asiwo iyo mukana weGPS kufamba nekutarisa kuburikidza nechiratidziro cheichi chigadzirwa zvese zvinoratidza zvatinofanira kutevera. Ini ndoziva kuti iyo nyowani yekuvandudza yeSygic app ine yakafanana basa uye isu tinofanirwa kuzviedza, asi sezvaungaona muiyo yapfuura vhidhiyo, iyo nyowani ARKit kubva kuApple uye iOS 11 inovimbisa zvakawanda ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 11 » Saka unogona kushandisa iyo iOS 11 ARKit kufamba neGPS uye nekuona nzvimbo dzinonakidza
Deirdre O'Brien, Apple itsva VP yeVashandi
WhatsApp yatotibvumidza kutumira chero mhando gwaro